The echichi deturu maka igwe anaghị agba nchara multistage centrifugal mgbapụta - China Shanghai SOG nfuli
Dị ka ihe ọma dị ka mmiri
The echichi deturu maka igwe anaghị agba nchara multistage centrifugal mgbapụta
The nwụnye Notes maka igwe anaghị agba nchara Multistage centrifugal mgbapụta:
1. Site anaghị agba nchara multistage centrifugal mgbapụta echichi technology, na mmiri anwụrụ na-achọ a na nlezianya akara ọnọdụ, ike nwere anwụrụ ehi ehi ma ọ bụ leakage, ma ọ ga-ebibi ndị agụụ ogo na mmiri mmiri nke mgbapụta, ime ka mgbapụta mmiri mmepụta bụ ebelata, ma ọ bụ na ọ ga-adị oké njọ isere mmiri. Ya mere, anyị ga-agbasi-eme ezi ọrụ na interface nke pipeline iji hụ ndị na-ewu àgwà nke pipeline njikọ.
2. Ọ ga-kwuru na mgbe isi na mmiri okpomọkụ nke igwe anaghị agba nchara multistage centrifugal mgbapụta na pipeline centrifugal mgbapụta echichi dị iche iche si ibuo ọnọdụ, ma ọ bụrụ na mpaghara elu bụ ihe karịrị 300 mita ma ọ bụ na-pumped mmiri okpomọkụ karịa 20 ogo Celsius, na gbakọọ uru ga-gbazie. Nke ahụ bụ, ikuku mgbali dị iche iche elevations na jupụta Alụlụụ mgbali n'elu mmiri okpomọkụ nke 20 degrees Celsius.However, mgbe mmiri okpomọkụ bụ n'okpuru 20 degrees Celsius, jupụta uzuoku mgbali nwere ike ịbụ negligible.
3. Iji gosi mgbapụta echichi elu (ie mmiri). Nke a dị elu na-ezo aka ha ọtọ n'agbata mmiri n'elu na center-akara nke mgbapụta impeller. Ọ gaghị mgbagwoju anya na allowable mmiri elu. Na agụụ elu-ekwe na mmiri mgbapụta ngwaahịa elucidation akwụkwọ ma ọ bụ nameplate egosi agụụ uru uzo mmiri ngalaba nke mmiri mgbapụta. Ọ e ji amata ịkwụsị nnwale n'okpuru nkịtị ikuku nsogbu na a mmiri okpomọkụ nke 20 degrees Celsius. Ọ na-adịghị eche banyere eruba n'ime mmiri mgbe mmiri anwụrụ na-ekwekọghị. The elu nke mgbapụta unit kwesịrị ịbụ obodo uru fọdụrụ mgbe ikwe ka agụụ elu ka deducted mgbe ọnwụ nke mmiri akara nke mmiri ifiom. The elu nke mgbapụta unit ike gafere gbakọọ uru. Ma ọ bụghị ya, mmiri mgbapụta agaghị emebi elu.
4. The mmetụta nke gbakọọ uru bụ isi -loss ruru ka anwụrụ na-eguzogide nke mmiri ifiom. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị ịmụta nke kasị nso piping ndokwa ma wụnye n'ikpere aka oyiyi akwa dị ukwuu dị ka o kwere omume. Ọ bụkwa conceivable na n'ụzọ kwesịrị ekwesị ndokwa ọkpọkọ na ụfọdụ calibers iji belata eruba ọnụego na ọkpọkọ.